Xildhibaan Mahad Salaad oo bulshada la wadaagay farriin ka timid Isbitaal Banaadir iyo Coronavirus | XORRIYA NEWS
Home Wararka Xildhibaan Mahad Salaad oo bulshada la wadaagay farriin ka timid Isbitaal Banaadir...
Xildhibaan Mahad Salaad oo bulshada la wadaagay farriin ka timid Isbitaal Banaadir iyo Coronavirus
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa soo bandhigay qeyla dhaan ka timid Isbitaalka Hooyada iyo Dhalaan ee Banaadir, oo ka mid ahaa Isbitaalada la geeyay qofkii u horeeyay ee u geeriyooday Cudurka Coronavirus.
Mahad Salaad ayaa sheegay in farriinta uu u soo diray qof ka shaqeeya Isbitaalka, lana wadaagay madaxda sare ee dalka qaarkood, isagoo tilmaamay in isbitaalka la geeyay bukaanka geeriyooday ay la kulmeen shaqaale iyo dhaqaatiirta isbitaalka isagoo dalbaday in arrintan si degdeg ah looga howlgalo.
QAYLODHAAN KA TIMID ISBITAAL BANAADIR
Qof ka shaqeeya Isbitaal Banaadir ayaa xogtaan xalay ii soo diray. Isla markiiba waxaan la wadaagay madaxda sare qaarkood, waanan rajeynayaa in si degdeg ah looga howlgalo. Hadii sidaan wax u dhaceen dalkaan waxaa ku soo socda dhibaato aad u culus ee fadlan hurdada halaga kaco
Salaan kadib, waxaan rabaa inaan kula wadaago xaaladda uu marayo Caabuqa Covid 19, marxaladaha uu soo maray bukaankii u geeriyooday cudurkaan iyo sida ay wax u dhaceen:
Kadib markii la ogaaday in agaasime Fartuun Shariif Aabaheed qabo cudurka Covid 19 waa laga bixiyay Isbitaalka waxaana la geeyay Isbitaal Martiini oo galabnimadii Arbacada uu ku geeriyooday Allaha u naxariisto. Dhakhtarkii ka qaaday xaakada (sputum) iyo agaasimaha iyo hal qof oo kale kaliya ayaa karantiil la geliyay si loo hubsado badqabkooda